12 NZIRA DZEKUGADZIRISA NHARE YAKO HAIZOBHADHARISE ZVAKAKODZERA - NYORO
12 Nzira dzekugadzirisa Nhare Yako Haizobhadharise Zvakakodzera
Haiwa! Foni yako iri kuchaja zvishoma nezvishoma here? Kana zvakatonyanya, kusabhadhariswa zvachose? Ihope dzakadii! Ndinoziva iko kunzwa kana iwe usinganzwe iko kudiki toni kana iwe uchivhara mufoni yako yekuchaja kunogona kunge kunotyisa. Izvi zvinogona kuunza matambudziko mazhinji.
Izvi zvinogona kuitika kana chaja yako yamira kushanda kana kana chiteshi chako chekuchaja chine jecha rakaiswa mukati maro kubva parwendo rwako rwekupedzisira rweGoa. Asi hesi! Hapana chikonzero chekumhanyira kuchitoro chekugadzirisa ipapo. Tine musana wako.
Nediki yekubata uye yekukweva pano nepapo, isu tinokubatsira iwe kupfuura iri dambudziko. Tine akati wandei matipi uye manomano akanyorwa pasi kwauri mune irwo runyorwa pazasi. Aya ma hacks achashanda kune ese mudziyo. Saka tora mweya wakadzika uye ngatitangei neiyi hacks.
Maitiro 1: Reboot Yako Runhare
Maitiro 2: Tarisa iyo Micro USB Port
Maitiro 3: Geza Chiteshi Chekuchaja
Maitiro 4: Tarisa Tambo
Maitiro 5: Tarisa iyo Wall Plug Adapter
Maitiro 6: Tarisa Simba Rako Kunobva
Maitiro 7: Usashandise yako Nhare Uchiri Kubhadhara
Maitiro 8: Misa maApplication Anomhanya MuKashure
Maitiro 9: Bvisa maApplication Anokonzera Chinyorwa
Maitiro 10: Gadzira Software Crash neRebooting Chishandiso
Maitiro 11: Gadziridza Iyo Software Pane Yako Runhare
Maitiro 12: Dzosera Software Kuvandudza pane yako Runhare
Kunogona Kukuvadza Kwemvura kungave chikonzero here?
Shandisa Ampere App
Edza Booting mudziyo wako Safe Mode
Smartphones anowanzo kuve nenyaya, uye zvese zvavanoda kugadzirisa zvishoma. Dzimwe nguva, kungotangazve chako chichagadzirisa chikuru chematambudziko acho. Kudzorerazve foni yako kunomisa ese maapplication anomhanya kumashure uye kugadzirisa izvo zvenguva pfupi glitches.
Kuti utangezve foni yako zvese zvaunoda kuti uite aya matanho akapusa:
1. Dhinda uye ubatisise Simba bhatani renhare yako.
2. Zvino, famba nenzira Kutangazve / Kutangazve Bhatani uye sarudza iro.
Iwe ikozvino wakanaka kuenda!
Iri idambudziko rakajairika uye rinogona kuitika kana mukati meiyo Micro USB chiteshi uye charja isinga sangana kana kubatana zvakanaka. Paunoramba uchibvisa uye nekuisa iyojaja, inogona kukonzera kukuvara kwenguva pfupi kana zvachose uye inogona kutungamira kune mashoma Hardware kuremara. Nekudaro, zvirinani kudzivirira iyo uye yekuita maitiro.
Asi usazvidya mwoyo! Iwe unogona nyore kugadzirisa izvi nekudzima chako chishandiso kana nekungofambisa tabo diki mukati mefoni yako USB chiteshi padiki padiki neinoti meno kana tsono. Uye saizvozvo, dambudziko rako richagadziriswa.
Kunyangwe idiki diki yeguruva kana chinhu kubva muhomwe yako kana juzi rinogona kuva rinotyisa kwazvo kana rikapinda pombi yako yekuchaja. Izvi zvinodzivirira zvinogona kukonzera dambudziko mune chero rudzi rwechiteshi, senge, USB-C chiteshi kana Mheni, Micro USB madoko, nezvimwe. Mumamiriro ezvinhu aya, zvinoitika ndezvekuti zvidimbu zvidiki izvi zvinoita sechipingamupinyi chemuviri pakati pechaja nemukati mechiteshi, izvo zvinotadzisa foni kubhadharisa. Unogona kungoedza kufuridza mweya mukati mechaji yekuchaja, inogona kugadzirisa dambudziko.
Kana zvisina kudaro, nyatsoedza kuisa tsono kana bhurasho rekare rezino mukati mechiteshi, uye nekuchenesa izvo, izvo zvinokanganisa. Zvishoma tweak pano neapo zvinogona kukubatsira kunze uye kugadzirisa iri dambudziko.
Kana kuchenesa chiteshi kukasashanda kwauri, pamwe dambudziko nderekuchaja tambo. Tambo dzakakanganisika dzinogona kuve chinokonzera dambudziko iri. Kazhinji tambo dzekuchaja dzatinopihwa nadzo dzinotetepa. Kusiyana nemaadapter, haagare kwenguva refu.
Kugadzirisa izvi, mhinduro yakanakisa kuyedza kushandisa imwe tambo yefoni yako. Kana foni ikatanga kuchaja, saka iwe wawana chinokonzera dambudziko rako.
Uyezve Verenga: 6 Nzira dzekugadzirisa OK Google Isiri Kushanda
Kana tambo yako isiri iro dambudziko, pamwe adapta iri mukukanganisa. Izvi zvinowanzoitika kana charger yako iine tambo yakasarudzika uye adapta. Kana iyo plug yemadziro Adapter iine hurema, edza kushandisa yako charger pane imwe foni uye uone kana iri kushanda kana kwete.
Kana zvimwewo, iwe unogona zvakare kuyedza uye kushandisa imwe yeimwe gadziriso yemidziyo. Inogona kugadzirisa dambudziko rako.
Izvi zvingaite sezviri pachena, asi isu tinowanzo kufuratira izvo zvinowanzoitika zvikonzero. Anonetsa anogona kuve iye anopa simba mune ino mamiriro. Pamwe kuvhara mune imwe nzvimbo inoshanduka kunogona kuita hunyengeri.
Kana iwe uri mumwe wevaya vakapenga vakapindwa muropa vane tsika yekushandisa foni nguva dzese, kunyangwe iri kuchaja, zvinogona kukonzera kuti foni ichiraje zvishoma nezvishoma. Kazhinji paunoshandisa foni yako ichiri kuchaja, unoona kuti foni yako iri kuchaja zvishoma nezvishoma. Chikonzero chiri shure kweichi ndechekuti mashandisiro aunoshandisa panguva yairi kuchaja, pedza bhatiri, saka bhatiri rinochaja nemutengo unodzikira. Kunyanya kana uchishandisa nharembozha nguva dzose kana uchitamba mutambo unorema wevhidhiyo, foni yako ichachaja zvishoma nezvishoma.
Mune zvimwe zviitiko, unogona kuwana fungidziro yekuti foni yako haisi kubhadhariswa zvachose, uye pamwe urikurasikirwa nebhatiri pachinzvimbo. Izvi zvinoitika muzviitiko zvakanyanyisa uye zvinogona kudzivirirwa nekusashandisa chimbo chako pachiri kuchaja.
Mirira foni yako kuti iwedzere simba uye woishandisa sezvaunoda. Kana ichi chiri chikonzero chechinetso chako, edza kutarisa pamhinduro. Kana zvisiri, isu tine mamwe manomano uye matipi.
Maapplication anomhanya kumashure anogona kuve chikonzero cheakawanda matambudziko. Izvo zvinokanganisa kumhanya kwekuchaja. Kwete izvozvo chete, zvinotodzivirira mashandiro efoni yako uye zvinogona zvakare kubvisa bhatiri rako nekukurumidza.
Zvinogona kunge zvisiri dambudziko kune nhare nyowani sezvo vaine zvirinani-zvinoshanda masisitimu uye yakagadziridzwa Hardware; izvi zvinowanzoita kunge dambudziko nefoni dzisisashandiswe. Unogona kutarisa zviri nyore kana foni yako iine dambudziko iri.
Tevedza nhanho idzi kuti uedze.
1. Enda kune iyo Zvirongwa sarudzo uye tsvaga Zvirongwa.
2. Zvino, tinya Manage Apps uye sarudza iyo App yaunoda kudzima.
3. Sarudza iyo Kumanikidza Kumira bhatani uye pinda Zvakanaka.
Kuti udzivise mamwe maApp, dzokera kumenyu yapfuura, uye dzokorora maitiro.
Ona kana iwe ukawana mutsauko unooneka mukuita kwako kuchaja. Zvakare, dambudziko iri kashoma kubata iyo iOS zvishandiso nekuda kwekutonga kuri nani kunochengetwa neApple pane maapplication anomhanya pane chako kifaa.
Pasina mubvunzo, chechitatu-bato maapplication anoita kuti hupenyu hwedu huve nyore, asi mamwe acho anogona kukanganisa hupenyu hwako hwebhatiri uye kukanganisa hupenyu hwebhatiri rwefoni. Kana iwe wakatorodha Anwendung munguva pfupi yapfuura, mushure meizvozvo iwe uri kutarisana nenyaya yekuchaja kazhinji, ungangoda kuburitsa iyo app nekukurumidza sezvazvinogona.
Dzimwe nguva, kana foni yako ikaramba kushanda, kunyangwe mushure mekuyedza adapta nyowani, tambo dzakasiyana kana zvigadziko zvekuchaja, nezvimwe zvinogona kunge paine mukana wekupunzika kwesoftware. Rombo rakanaka kwauri, inguva yekeke yekugadzirisa dambudziko iri kunyangwe iri dambudziko riri rakajairika uye rakaoma kuona asi rinogona kuve chikonzero chingangoita kuti foni yako inonoke kumhanyisa kumhanya.
Kana software ikapunzika, foni haikwanise kuziva iyojaja, kunyangwe kana iyo Hardware yakanyatsogadzikana. Izvi zvinoitika kana system ikabondera uye inogona kugadziriswa zviri nyore nekungotangazve kana kudzoreredza chishandiso chako.
Kutanga patsva kana kupfava reset kuchachenesa kunze kwese ruzivo uye dhata pamwe nemaapplication kubva mundangariro yefoni ( RAM ), asi yako data yakachengetwa icharamba yakachengeteka uye irine ruzha. Izvo zvakare zvinomisa chero asina basa maapplication anomhanya kumashure, zvichikonzera bhatiri kudhonza uye kunonoka kuita.
Kuchengeta software yefoni kukwira kunozovandudza mashandiro uye kugadzirisa mabhambu ekuchengetedza. Kwete izvozvo chete, asi zvichawedzerawo ruzivo rwemushandisi kune ese maApple neApple. Zvichida, iwe wakagamuchira iyo Inoshanda Sisitimu yekuvandudza, uye foni yako yatove nedambudziko rekuchaja bhatiri, wobva wadzokorora chako kifaa, uye pamwe ichagadzirisa dambudziko. Unofanira kuedza.
Zvino, iwe unogona zvirokwazvo kutonga kunze mukana wesoftware zvichikonzera iri dambudziko rekuchaja kune yako foni.
Zvichida, kana chishandiso chako chisingabhadhare zvinoenderana mushure mekugadziridzwa kwesoftware, ungangoda kudzokera kumashure kune yapfuura vhezheni.
Zvinoenderana nekuti foni yako iri itsva sei. Kazhinji, foni nyowani ichavandudza kana ichigadzirisa, asi tsikidzi yekuchengetedza inogona kuumba dambudziko nefoni yako yekuchaja system. Zvekare zvishandiso hazviwanzo kugona kubata yakakwira vhezheni yesoftware yakavandudzwa, uye inogona kutungamira kumatambudziko akati wandei kubva ayo anogona kunonoka kuchaja kana kusajaja foni.
Iyo software yekudzosera kumashure maitiro inogona kuve inononoka uye ingangoda ruzivo rwehunyanzvi, asi zvichave zvakakodzera kupa kuyedza kuchengetedza hupenyu hwako hwebhatiri uye kugadzirisa mwero wayo wekuchaja.
Yakurudzirwa: Maitiro Ekushandisa Nemaoko Kuvandudza Android Kune Dzazvino Shanduro
Kana iwe uchangobva kudiridza foni yako, izvi zvinogona kunge zviri izvo zvinoita kuti foni yako ichinonoke kuchaja. Bhatiri kutsiva inogona kuve yako yega mhinduro kana foni yako iri kushanda mushe mushe, asi bhatiri iri kukupa iwe nguva yakaoma.
Kana iwe uine nharembozha nyowani ine yakasarudzika-muviri dhizaini uye risingabvisike bhatiri, uchafanirwa kusvika kune inochengeterwa vatengi. Kushanyira shopu yekugadzirisa nhare ichave iri sarudzo yakanakisa panguva ino.
windows 10 wifi inodonha nguva nenguva
Dhawunirodha iyo Ampere app kubva Play Store; ichakubatsira iwe kuti uwane nyaya pafoni yako. Kunyangwe bhagi rekuchengetedza rinowanikwa pane mbozhanhare inoshanda sisitimu inogona kudzivirira iyo yekuchaja icon kubva kuratidza kumusoro kana yako kifaa ichivharirwa mukati.
Ampere inokugonesa iwe kutarisa kuti ingani mudziyo wako urikubuditsa kana kubhadharisa pane imwe nguva yenguva. Paunobatanidza foni yako kune simba sosi, tanga iyo Ampere app, uye uone kana foni iri kubhadharisa kana kwete.
Pamwe chete neizvozvo, Ampere ine zvimwe zvinoverengeka maficha zvakare, senge inokuudza iwe kana bhatiri renhare yako riri mumamiriro akanaka, tembiricha yazvino, uye nemhepo inowanikwa.
Iwe unogona zvakare kuyedza dambudziko iri nekukiya iyo foni yefoni uye nekuisa iyo yekuchaja tambo. Kuratidzwa kwefoni yako kuchapenya nemhepo yekuchaja kana iri kushanda nemazvo.
Kubvarura chigadziro chako mumamiriro akachengeteka ndiyo nzira huru. Ndeipi nzira yakachengeteka inoita ndeye, iyo inodzivirira yako yechitatu bato maapplication kubva kumhanya pane yako kifaa.
Kana iwe uchibudirira kubhadharisa chishandiso chako mune yakachengeteka modhi, iwe zvechokwadi unoziva kuti chechitatu-bato maapplication ane mhosva. Paunenge iwe uine chokwadi nezve izvo, bvisa chero chechitatu-bato maapplication iwe awakadhonza nguva pfupi yadarika. Zvinogona kunge zviri izvo zvinokonzera matambudziko ako ekuchaja.
Tevedza nhanho idzi kuti uite saizvozvo:
1. Uninstall maapuro achangoburwa awakatora (ayo ausingavimbe nawo kana asina kushandisa kwechinguva.)
2. Shure kwaizvozvo, Tangazve yako kifaa zvakajairwa uye uone kana ichichaja zvakajairika.
Matanho ekugonesa Safe Mode pane zvishandiso zveApple.
1. Dhinda & bata iyo Simba bhatani.
2. Enda Power Off bhatani uye tinya ubate it
3. Mushure mekubvuma kukurumidza, foni ichaita reboot mumamiriro akachengeteka .
Basa rako pano raitwa.
Kana iwe uchida kubuda nenzira yakachengeteka, tevera maitiro akafanana, uye sarudza iyo Tangazve sarudzo panguva ino. Maitiro acho anogona kusiyana nefoni nefoni sezvo yega yega android inoshanda zvakasiyana.
Yekupedzisira resort- YeVatengi Yekutarisira Chitoro
Kana pasina chimwe cheiyi hacks chikaita kunze, saka pamwe pane chakakanganisika mu Hardware. Zvakanaka kuenda nefoni yako kuchitoro chekugadzira nhare zvisati zvanyanyisa. Inofanira kunge iri sarudzo yako yekupedzisira.
Ndinoziva, bhatiri renhare kusachaja kunogona kuita basa hombe. Pakupedzisira, tinovimba isu takabudirira kukubatsira iwe kuti ubude mudambudziko iri. Tiudzei kuti ndeipi kubheja kwawakawana kunonyanya kubatsira. Tichave takamirira mhinduro yako.
Nei Microsoft Edge isingashande
zvinorevei kugadzirisa muenzi
yangu yekutanga menyu haisi kushanda
mira windows 10 kumba auto inogadziridza
maonero 2016 hapana mhinduro dzekutsvaga
Nei purinda yangu iri mukukanganisa mamiriro